CAJIIB: 7 Jir Gacmo La’aan ku Dhalatay oo ku Guulasatay Tartanka Far-qoraal oo Heer Qaran ah | Hawraar
May 14, 2016 Xiisaha/Xulashada
CAJIIB: 7 Jir Gacmo La’aan ku Dhalatay oo ku Guulasatay Tartanka Far-qoraal oo Heer Qaran ah
Anaya Ellick oo 7 jir ah oo aan gacmo ku dhalan, kuna jirta fasalka koowaad ee magaalada Virginia ee dalka Maraykanka, ayaa ku guulaysatay tartanka far barashada Maraykanka ee heer qaran, kadib markii ay ka guulaysatay 50 carruur ah oo dalka oo dhan la isaga keenay si ay tartankan uga qaybgalaan.
Ubadkan waxay u tartamaayey abaalmarinta 2016-ka ee la yidhaa Nicholas Maxism Speical Award oo la siiyo ubadka far qurux badnida la yimaada.
Anaya oo aan Alle gacmo u samayn amma aan kuba soo dhalan, waxa ay qoraalka u isticmaasha gumuda hore ee gacantu ku taalo, waanay ku guulaysatay tartankaas, iyadoo dhammaan dadkii goobta joogay aad uga yaabeen, farxadna muujiyeen markii loogu dhawaaqay in ay tartankaas qaaday.
Tartankan waxa kale oo ay ku qaaday si loo dhiirigeliyo ubadka aan laxaadkooda ka maqan yahay sida ay ku dhawaaqeen kooxda garsoorayaasha ka ahayd abaalmarintan Nicholas Maxim Special Award.
Sida uu maamulaha dugsigeedu sheegay Anya ayaa ku dhiiratay in ay tartankan ka qaybqaadato, kaasoo u furan carruurta ku jira dugsiyada xannaanada (Kindergarten).
“Waxa jira wax yar oo aanay run ahaantii gabadha yar qaban karin. Aad bay u dedaashay. Way go’aan qaadatay, waana qof madaxbannaan, waana gabadh hami iyo guul jecel, wax raalligelin ah laga bixin maayo qoraalka gabadhan yar,” ayuu yidhi mid ka mid ah garsoorayaashii tartanka hayey.
Agaasimaha tartankan Kathleen Wright ayaa ABC News u sheegtay, “Waannu eegaynay marka ay qooraysay, waannu cajabnay far-qoraalkeedu siduu u qurux badan yahay, iyadoon gacmo lahayn bay qortay. Qoraalkeeda wax la barbardhigi lahaa qof gacmo leh.”